Kooxda Manchester City oo heshiis cusub ku abaal-marinaysa mid ka mid ah xiddigaheeda – Gool FM
(Manchester) 21 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay John Stones u gacan gelinayso heshiis cusub oo uu ku sii joogayo garoonka Etihad.
John Stones oo 24-sano jir ah ayaa in ka badan 100 kulan u saftay kooxda Citizens lagu naanayso tan iyo markii uu 2016-kii uga soo dhaqaaqay Naadiga Everton.
Xiddiga xulka qaranka England ayaa 36 kulan ciyaaray tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan, laakiin shan ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeysay waxa uu ku soo bilowday kursiga keydka, macallin Pep Guardiola ayaana door-bidaya fursadaha kale ee difaacan.
Stones ayaa heshiiskiisa kooxda Man City waxa uu ku eg yahay illaa xagaaga 2022-ka, laakiin sida ay warinayso Jariiradda The Mirror kooxda difaacanaysa horyaalka Premier League ayaa isku diyaarinaysa inay difaacan dhexe u gacan geliso heshiis cusub si uu u muujiyo inuu weli qeyb ka yahay mustaqbalka kooxda.
Laacibkii hore ee da’yarta Barnsley kaasoo ka mid ahaa xiddigihii xulka qaranka England ka caawiyey inay gaaraan afar dhammaadka koobkii Adduunka 2018 ayaa u saftay kooxdiisa 22 kulan 34 kulan oo ay ciyaartay horyaalka Premier League inta lagu guda jiro xilli ciyaareedkan 2018-19.